आ/माको को/रोनाका का/रण मृ/त्यु भएपछि छो/राले पनि भि/रबा,ट हा/म, फा/लेर प्रा/ण त्या, गे! – Taja Khawar
आ/माको को/रोनाका का/रण मृ/त्यु भएपछि छो/राले पनि भि/रबा,ट हा/म, फा/लेर प्रा/ण त्या, गे!
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०१, २०७८ समय: १९:२१:०७
प्युठान । दीपेन्द्र सुनार आफ्नी आमाको गत बैशाख २४ गते कोरोनाका का रण मृत्यु भए सङै डि प्रेस नमा परि भिरबाट हा म फाली ग म्भी र घा इते भएका युवा को मृ त्यु भएको छ।
जिल्लाको मालारानी गाउपालिका वार्ड न ६ लोहोरी सल्लिधाराका ३२ बर्षा का दल बहादुर थापामगरले आफ्नो आमाको कोरोना को सिकार बन्दै ज्या न गु माएको बि यो गमा गत बैशाख २४ गते शुक्रबार राती भिरबाट हा म फा ली ग म्भीर भएका उनको उ पचार गराइएको एक साता पछि चित वनको पुरानो अस्पतालमा शुक्रबार बेलुका ४ बजे मृ त्यु भएको परिवारले जनाएको छ।
गत बैशाख २४ गते उनकी आमाको कोरोनाका का रण अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा ज्या न गए सङै आफुले चलाउदै आएको एम्बुलेन्स सदरमुकाम सन्धिखर्कमै छा डी अर्धपागल जस्तै भै रातको समय पैदलयात्रा आएका उनी राती १० बजे मालारानी कै बागी खोलामा रहेको झोलुङ्गे पुलको नजिक को भि रबाट हा म फा ली ग’म्भीर अबस्थामा उनलाइ प्रहरीले उ द्घार गरि जिल्ला हस्पिटल लगेका थिए।
तर उनको अ बस्था ग म्भी र भएको कारण जिल्ला हस्पिटल अर्घाखाँचीले बुटवल रिफर गरेको थियो। थापाको टाउकाको नसामा रगत जम्नुका साथै हात र ढाड भाचिएको र घाटिमा पनि स मस्या आएको हुदा बुटवल बाट पनि उनलाई चितवन पठाइएको थियो। आमाले ज्यान गु माएको एक हप्ता पछि अर्को परिवार को सदस्यले पनि ज्या न गु माउदा परिवार नै शो काकुल परेको छ।
बिगत केही बर्ष देखि मालारानीको लोहोरी मा होटल ब्याबसायी गर्दै आएका उनी ग त केही महिना देखि मालारानी गाउपालिका वार्ड न ६ ले सन्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स चा लक पनि थिए। मृ तक थापाका श्रीमती एक छोरी र एक छोरा रहेका छ्न। फोटो फाईल
Last Updated on: May 15th, 2021 at 7:21 pm
८२५ पटक हेरिएको